Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny fetin'ny fiadiana ny amboaran'i Carolina dia any amin'ny Surfers Top Paddle
Ny fiadiana ny amboara any Carolina dia festival mandritra ny efatra andro misy hazakazaka, seminera ary tobim-pitsaboana fito an'ny pro, fampirantiana vokatra ary fampisehoana.
"Ny amboaran'i Carolina no hany Association of the Paddlesurf Professionals ofisialy hetsika 2021," hoy i Tristan Boxford, tale jeneralin'ny APP. “Ity hetsika ity dia hanasongadinana ny lavitra sy ny sprint miaraka amin'ny vola loka APP. Na izany aza, noho ny toe-javatra tsy mahazatra dia tsy mandroso amin'ny fitsidihana eran-tany isika amin'ity taona ity. ”
Ny APP dia ekena sy voasazy ho toy ny fitsidihana tompon-daka eran-tany ho an'ny fiadiana ho tompon-daka amin'ny alàlan'ny federasiona komity olympika iraisam-pirenena momba ny fanatanjahan-tena sy ny fikolokoloana iraisam-pirenena.
Miaraka amoron-dranomasina sy amoron-dranomasina amoron-tsiraka ny toerana tsara indrindra sy ny hazakazaka rehetra ary ny hetsika dia manomboka sy mifarana ao amin'ny Blockade Runner Beach Resort, toeram-pialan-tsasatra ofisialy amboaran'ny Carolina. Manomboka amin'ny 4 Novambra ny hetsika ary mifarana amin'ny 7 Novambra.
Laharana faharoa eran'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny paddleboard ho an'ny vehivavy, April Zilg an'ny North Carolina, dia nanambara ny fikasana hifaninana amin'ny hazakazaka fasana feno herisetra 13 kilaometatra an'ny Cup any Wrightsville Beach. "Mikasa ny hazakazaka amin'ny Novambra aho," hoy i Zilg. “Iray amin'ireo hazakazaka lehibe indrindra eto an-tany io ary iray amin'ireo taranja sarotra indrindra.”
"Tsy manam-paharoa ny hazakazaka [Fasana], mitondra anao amin'ny ranomasina sy ny rano Intracoastal, mitety vavahady roa, miady amin'ny onja, ary miditra sy mivoaka amin'ny alàlan'ny surf," hoy i Zilg. “Fitsapana tena tsara amin'ny fahaiza-manao amin'ny mpivaro-mandeha hatrany izany, ary ny natiora reny dia tsy milalao mahafinaritra foana. Ivelan'ny hazakaza-dranomasina natokana ho an'ny surf, dia eo noho eo ny hazakazaka fasana, indrindra raha miady amin'ny onja mahery ianao. Avy lavitra amin'ny antsasaky ny hazakazaka marathon ihany koa, ka tena marina ny fikosoham-bary. ”
Ny mpandray anjara hafa tany am-boalohany dia misy an'i Casper Steinfath, Tompondaka Erantany manerantany amin'ny fizarana lehilahy. Nihalehibe tao amin'ny tanàna fanjonoana any Danemark i Steinfath dia naniry fatratra ny fanatanjahantena rano alohan'ny ahafahany mandeha, mitaingina ny vatofisin-drainy. Ankehitriny 28, Steinfath dia iray amin'ireo atleta fanatanjahan-tena tsara indrindra amin'ny rano, nahazo fandresena sy tompon-daka marobe nandritra ny asany.
Tamin'ny taona 2020, i Steinfath no voalohany nijoro taty am-pasika namakivaky an'i Skagerrak, ilay rano mamitaka 130 kilometatra manasaraka an'i Danemarka avy any Norvezy.
Ny mpanao sambo frantsay Arthur Arutkin, laharana faharoa manerantany, ary Titouan Puyo any New Caledonia, no laharana fahafito, no nanao sonia ny fifaninanana - miaraka amin'ny maro hafa ho avy.
Seychelle Webster, Tompondaka Erantany manerantany amin'ny fizarana vehivavy APP, dia hanatrika ny fiadiana ny amboara Carolina ary mikasa ny hanolotra tobim-pitsaboana, ho vonona mandritra ny andro demo ary hanampy mandritra ny hazakazaka Kids. "Tsy mikasa ny hanao hazakazaka aho amin'ity taona ity," hoy i Seychelle. “Ny fiadiana ny amboaran'i Carolina dia iray amin'ireo hazakazaka laharam-pahamehana indrindra nandritra ny taona. Saingy amin'izao fotoana izao, ny laharam-pahamehako voalohany sy ny fanamby mampientanentana ahy indrindra dia ny fitondrana vohoka. Ka io no ifantohako amin'ity taona ity, ary tsy hifaninana aho. ”
"Hifaninanana na tsia, amin'ity herinandro ity any Wrightsville dia tena hahafinaritra tokoa," hoy i Seychelle nanampy. “Tena faly aho mahita sy hahatratra ny rehetra ary hanohana ny APP sy ny amboara any Carolina na eo aza ny fanamby manerantany.”
Ny amboara Carolina dia karakarain'ny Wrightsville Beach Paddle Club ary natolotry ny Kona Brewing Company. Ny fiantrana voatendry ho an'ny amboaran'ny Carolina dia Nourish North Carolina, fikambanana tsy miankina miisa 501 (c) (3) izay mikendry ny hanome sakafo ara-pahasalamana ho an'ny ankizy noana, ahafahan'izy ireo mahomby amin'ny efitrano fianarana sy ny fiarahamonin'izy ireo.